Diiradda Caafimaadka iyo Daryeelka Dadweynaha Q3aad | ToggaHerer
← Daawo: Gudoomiye Saleebaan Gaal Oo dalka Dib ugu soo laabtay Kana hadlay Arimo Xasaasi ah Jawaabona ka bixyey Arimaha Qabyaalada cusboonaatay, Gudida Abaaraha, iyo Dagaalka ka socda Bariga
Daawo: “Biyaha Badda Somaliland Oo Beeraha Lagu Waraabinayo ayaan Daawaday Waa Qolo UK ah Si kadiso ah ayuunbay u yidhaahdeen Somalland waanu ka wadnaa Mashruucan” Yaasiin Deheeye Aadan →
Diiradda Caafimaadka iyo Daryeelka Dadweynaha Q3aad
Qaybtii 3-aad, Qalinkii: Jamal A. Muse
“Gorfeynta & Falanqeynta Arrimaha Caafimaadka, Adeegsiga Diirada Fogaanaraga, Daahfurka, Wacyigalinta, & Noolaynta Ka Hortaga Dilaaga Dedan”
Caadiyan cuddurkani wuxuu ka mid yahay koox cuddureedka ku faafa biyaha iyo cuntada oo si degdeg ah usoo bandhiga matag iyo shuban. Kuwaasi oo loo yaqaan“Acute enteric disease”. Wuxuu leeyahay waxyeelo badan oo kala gedisan, balse waxaa la og yahay inta badan inuu yahay mid astaamo dahsoon “asymptomatic infections”.
Bukaanka noocan ah hadaan markiiba lala gaadhin fuuq celin iyo dawayn, waxaa la saadaaliyaa inuu saacado kooban gudahood habdhiska wareega dhiigu kudumi karo oo u sabab u noqon karo dhimashada bukaanka. Calaamadahawaawayn ee lagu arko qofka uu asiibo shuban biyoodku waxaa ka mid ah:
1. Shuban: Run ahaantii shubanka daacuunku waa mid u janjeedha dhinaca degdegsiimaha, oo si dhakhso ah u keeni kara fuuq bax halis ah. Qiyaastii hal litir oo dareere ah ayaa ka baxa halkii saac qofka cuddurkani asiibo. Muuqaalka sindhada amma Saxarada ayaa noqda midab isku badhsan “Pale & milky colour” oo caddaan ku jiro, balse aannu aad u muuqan, waxaana loo yaqaan “Rice-water stool”.
2. Matag & yalaalugo: Yalaalugada waxaa la arkaa foolka amma wajigakoowaad ee cuddurka, hadii ay sii dabo dheerato oo ay saacado qaadato,waxay keentaa matag qayb wayn ka qaadan kara fuuq baxa bukaanka.
3. Fuuq-bax: Wuxuu u dhacaa si degdeg ah, weliba wakhti yar ka dibmarka la arko Calaamadaha cuddurka daacuun. Sheegmada heerka fuuq-baxa iyo halistiisu, waxay ku xidhan tahay kolba inta dareere ah eebukaanka ka baxa. Sida la wada ogsoon yahay fuuq-buxu wuxuu degdeg u lumiyaa walxaha macdanta ah “Minerals or solid inorganic
substance of natural occurrence” ee dhiiga aadmiga la socda. Ammuurtan ayaa ah mid aakhirka dhantaasha dheelitirnaanta walxaha muhiimka ah ee loo yaqaan Electrolytes sida Potasium, Sodium iyo Chloride.Hadaba cawaaqib xumada ka dhalata xaaladan waxaa loogu yeedhaa“Electrolyte imbalance”, waxayna muujisaa astaamo khatar ah gaar ahaan:
* Muruq- garaac “Muscle cramps”.Waa natiijo ka dhalata lumida walaxda isku dhiska cusbada sodium chloride “Nacl2” iyo walaxda muhiimka ah eepotassium.
* Argagax “Shock”: Tani waa waxyeeladda ugu daran ee fuuq baxa,waxaana yaraada xadiga dhiiga ah ee ku sugan habdhiska wareegga dhiiga. Taasi oo keenta xadidnaanta caddaadiska dhiiga iyo cadadka oxygen-ta jidhka ku jirta “A drop in blood pressure and a drop in the amount of oxygen in your body”. Hadii aan bukaanka daawo lala gaadhin, wuxuu u gudbaa marxalad adag oo la yidhaa “Severe hypovolemic shock”, oo laga yaabo in ay dhimasho u horseedo daqiiqado gudahood.
Ugu danbeyntii, guud ahaan ciyaalku calaamadaha lagu arko, waxay kala simanyihiin dadka waawayn, balse waxay aad iyo aad ugu nugul yihiin hoosaynta heerka macaanka dhiigooda ku jira “Hypoglycemia”. Waxaana sabab u ah fuuqbaxa ku dhacay oo dhalin kara:
* Miyir la’aan “unconscious”.
* Suuxdin “Suizures”.
* Koomo “Coma”.
Si kooban shuban biyoodka waxaa laga baadhi karaa meelo badan oo ay ka midyihiin Saxarada iyo mataga qofka, cuntada iyo biyaha wasakhaysan. Waxaana looadeegsan karaa baadhidooda dariiqyo kala gedisan oo ka kooban baadhitaan degdeg ah iyo mid muddo qaata.
Baadhitaanka daaha amma mudada dheer qaata waxaa la yidhaa tubta korinta“Culture method”, halkan marka la joogo waxaa muhiim ah in la eego astaamaha koriinka bakteeriyada iyo adeegsiga baadhitaanka “Biochemical test” lagu kala sooco wax soo saarka kimikaad ee noocyada kala gedisan ee bakteeriyada. ………………….La soco qaybo kale oo aad xiiso badan.